የኢትዮጵያ ጠ/ሚ ፕሮቶኮል ኃላፊ ከዱ /Itti-gaafatamaan dhimma pirotokoolii muummicha ministera Itoophiyaa sirnicha ganuudhaan Ameerikatti koolugaltummaa gaafatan
(Awash Post) — Obboo Baayyee Taaddasaa Tafarii, itti-gaafatamaan dhimma pirotokoolii Muummicha Ministera Haylamaaram Dassaaleny, mootummaa woggaa 20 oliif tajaajilaa ture ganuudhaan Ameerikatti koolugaltummaa gaafate. Ob. Baayyeen koolugaltummaa akka gaafatuuf kan isa dirqe haalli siyaasa biyyattii sadarkaa yaachisaa irra gayuu isaati. Hanga yeroo biyya gadi lakkisee bayetti, Ob. Baayyeen, nama furtuu waajjira MM Haylamaaram Dassaaleny harkaa […]
Tokkummaa fi Bilchina Irreecha 2017 Irratti Agarsiisne Bilisummaa Keenyaaf Haa Oolchinu (Ijoo Dubbii ABO) — Diinni waloo nuti (Oromoon) akka Sabaatti qab -nu humna weerartuu alagaa kan afaan qawweetiin biyya teenya (Oromiyaa) dhuunfatee mirga biyya teenya irratti abboomuu (Walabummaa) nu sarbee dha. Humnoota weerartuu alagaa dhufaa-dabraan yeroo gara Jaarraa tokkoo fi walakkaatti dhihaatuuf Oromiyaa irratti wal jijjiiraa […]
“QABSOON OROMOO” NI TIIFEE MALEE HIN ROOBNEE !!!
“QABSOON OROMOO” NI TIIFEE MALEE HIN ROOBNEE !!! SEENAA Y.G (2005) Qabsoon nuuti amma itti seennee jirru, eegee qeerransaa hin qabanii….isa jedhaniin tokko. Kana booda, Milkaa’uuf wareegamni nu gaafatu, yoo duubatti deebineef wareegama nu gaafatu gonkumaa hin caaluu. Bakka amma irra jirru irraa duubatti deebinaan, of awwaallee, awwaala keenya irratti diinni akka sirbuu hayyamuudha. Sochiin gama […]